AIDSn Itiyoopiyaa keessa gad cabeeraa Ebolaa irratti barnoonni kennamaa jira
Guyyaan AIDs addunya torban darbe yaadatamee oole. Itiyoopiyaa keessatti immoo guyyaan kun dilbata darbe bakka dhibeen HIV AIDS keessatti hammaatee jiru Gambeela keessatti dilbata darbe yaadatamee oole.
Sababaan kun ta’eefis uummata naannoo jiraatuuf dadammaqiinsaa fi gorsa kennuuf akka ta’e directorri ol aanaa waajjira ittisaa fi to’annoo HIV AIDS fedeeraalaa obbo Birhaanuu Fayyisaa ibsaniiru.
Yeroo ammaa biyyattii keessaa dhukkuba kanaan haaraa qabamuun dhibbaa irraa harka sagaltamaan kan gad bu’e ta’uu isaa kan ibsan obbo Birhaanuun dhaloota viresii HIV irraa walaba ta’e qabaachuuf galma TM bara 2030 lafa kaa’ate biras ni geenya jedhan. Gorsii fi dadammaqiinsi kennamu jijjiirraa amalaa waan fideef faca’inni dhibee kanaa akkaan gad bu’ee jira, kanneen viresii kana waliin jiraataniifis raabsiin dawaas sirriitti geggeeffamaa waan jiruuf haala gaariin sochiin godhamaa jiraachuu isaa dubbataniiru.
Gama kaaniin Akaadaamiin saayinsii kan Itiyoophiyaa fi waldaan eegumsa fayyaa Itiyophiyaa turban darbe dhukkuba Ibolaa kan ilaaleen uumamnni hubannaa qabi akka guddisuuf jecha marii barnootaa tokko gaggeessanii jiru. Qaama hawaasaa adda addaa irraa namoonni walitti qabaman kun dhukkuba Ibolaa kan ilaaleen hubannaa argatan gara naannoo irraa dhufaniitti deebi’anii uummata akka barsisaniif yaadamee ta’uun ibsamee jira.